Kungani-Easter ngokuthi ama-Easter? Kungani ikhekhe ngokuthi ama-Easter?
Igama elithi "Easter" zingatholakala ngezilimi eziningi, ezifana isiHebheru, isiLatini noma isiGreki. Ngokuphawulekayo, ukuhunyushwa eside ngazo zonke izilimi nse - ". Odlulayo" Abantu ababethi bangamaKristu, zona zijwayele leli zwi, okuyinto isihloko imikhosi ebalulekile kakhulu inkolo yabo. Kodwa, lo mkhosi ubizwa ngokuthi Ascension. It lugujwa ngemva yokuHlawula unyaka ngamunye ewela izinsuku ezahlukene. Kodwa kungani-Easter ngokuthi ama-Easter? Izimpendulo kwalo mbuzo kungabonakala okwengeziwe okutholakala.
Nasibuka imibhalo yesandla ubudala futhi izincwadi, kuba lula ukuthola ukuthi umkhosi wama-Easter lugujwe ngisho nangaphambi kokuzalwa kukaKristu. Lo mcimbi wawugxile umkhosi izakhamizi abangamaJuda. Lolu suku lugujwe emkhayeni emincane. Lomgubho main wawa ngosuku entsha inyanga isigaba.
Futhi okwamanje kungani iholide ibizwa ngokuthi "Easter"? Ngalolusuku obekumele ukwenza umnikelo, othiwa iPhasika. Imvu noma imbuzi ibulawe uhulumeni ngokushesha ukuze umusa wasezulwini kwehlela-ke umhlambi kanye nomholi walo. Umhlatshelo ngokuqapha, kusukela lalibhekwa okuyihlazo ngokonakalisa lapho barrette okungenani oyedwa thambo isilwane. igazi lemvu ezigcotshwe umnyango, kanti inyama kudliwa endlini. Kusukela ngaleso ka isiko mkhosi wasendulo, kwakunikelwa bamisa ngakho shayela ngalolo suku.
Kungani ama-Easter ngokuthi ama-Easter? Yini kunezizathu? I iholide ngokwayo wathatha enye, ukubaluleka ebanzi xaxa futhi engcwele. Noma kunjalo, iNdodana kaNkulunkulu uqobo lwayo ezihlatshelwe ukuvikela lonke lwesintu futhi ukuze ngenhloso yokuphoqa ubaba wakhe wehlela phezu kwabo bonke abantu. Kusuka ukubaluleka elifanayo ezintweni eziphilayo lokunqoba Easter namuhla ibhekwa njengomlando wesonto obaluleke kakhulu abantu. Ngokusho yetinsita nje kule isintu usuku ithole ithuba lesibili, umhlatshelo zokuhlambuluka eyayinikelwa e amandla othando, futhi athole izibusiso. Yingakho abantu abanamathela ngokuzila ukudla okuqinile ngaphambi kwe-Easter.
Ikhekhe - uphawu Ovukweni
Elikhulu isinkwa elimnandi (imvubelo ikhekhe) nge umfanekiso Vuko noma nge cross eSontweni Lobu-Orthodox kubhekwa namakhekhe okungokomthetho simele imvuselelo likaJesu. Kungani-Easter ngokuthi ama-Easter? Yebo, ngobe lena ikhekhe futhi iyingxenye ebalulekile nokuhlanganyela kulelo holide. Ivame obhakwe mkhosi wenkolo oyinhloko zonke Orthodox - Easter. AmaKristu, ngaphezu isinkwa Easter, kwasebenza etafuleni ngisho isihlabathi "ugogo." Bekanye amaqanda ezidayiwe Curd Easter kanye ikhekhe - main izitsha idili zemikhosi.
ukuqokwa Ezingokomoya ikhekhe
Artos (eyahunyushwa isuselwa esiGrekini "okuvutshelweyo"), i-high imvubelo namabhanisi nge ngalé kwezindaba halo wameva iphethini esiphambanweni, kanye nesinkwa esingenamvubelo zishiswa eceleni ukugubha oNgcwele Easter Novuko kaKristu. Ngokusho iTestamente Elidala, abaphostoli, kusukela trapeznichat, washiya phakathi etafuleni ezingenalutho, ukubeka isinkwa bengabonakali seduze uJesu Kristu.
Kungani-Easter ngokuthi ama-Easter? Kukhona ezinye ezinganekwaneni ongakusho ngakho. Ngosuku Easter artos kwenziwe udwendwe wasibeka esontweni etafuleni ekhethekile. Zonke ngesonto, lokhu bayobhaka esigodlweni sezindela. Ngemva isibusiso ngoMgqibelo Isonto Bright Ngaye bonke kholwa. Lona uphawu ukuthi Kristu wakhuluma kubantwana bakwa-Orthodox isinkwa yangempela yokuphila.
Sam ikhekhe iphefumulelwe artos. Bhaka Muffin phakathi neSonto Elingcwele ku Maundy ngoLwesine ulingcwelise isonto. Isetshenziselwa bayobhaka isinkwa imvubelo (indawo eTestamenteni Elidala inhlama esingenamvubelo). Ngakho-ke, ama-Easter ikhekhe - liphinde uphawu intuthuko zeTestamente Elidala okuvela ku-Elisha.
Yini iTestamente Elidala
Ngo lo myalo Easter wabizwa ngokuthi iwundlu Kushone umkhosi - isampula okulandelayo lomhlatshelo kaJesu. Yena, benza imihlatshelo ukuzihlupha, wamvikela abantu abavela womuntu usizi, ukuhlushwa, isijeziso nesihogo. Lapho uJesu wavuka kwabafileyo, wabonakala enyameni entsha.
Kungani ikhekhe ngokuthi ama-Easter? Impendulo yalo mbuzo. ETestamenteni eLidala ngesikhathi zakhe kwakungekho noyedwa imiqondo ikhekhe. iwundlu Easter edla esingenamvubelo kunganambitheki (amakhekhe) kanye nemifino ebabayo. + Easter isinkwa kuyinto lokuzalwa lobuqaba futhi kubhekwa iwuphawu Phallus - lo nkulunkulu wamaqaba wenzalo. Ingqikithi ezingokomoya ikhekhe Easter wukuthi ngokudla ke, abantu Orthodox beza ekukhanyeni Vuko.
Kungani Easter ubizwa ngokuthi Ukukhanya
Isiko folksy kugujwa Easter sengathi kugujwa sokuvuselela nokuthuthukiswa zokuphila. Lokhu kusikisela hhayi kuphela imicabango kaJesu Orthodox Renaissance, kodwa futhi ukuba khona emasikweni abantu yokubukwa kobuqaba Awakening spring bemvelo ngemuva kokulala ebusika.
Ngokwe luvame lwemibono zenkolo ubani okufanele ama-Easter ukuze siphinde sithole ngokomzimba nangokwengqondo wona okwesikhathi eside yokuHlawula. Ngaphambi kwePhasika kwadingeka ukuba kubuyiselwe ukuthula ezitaladini, emakhaya, geza izindonga, iphansi, amafasitela, Uphahla lwangaphakathi lesithando ngomcako, ukukhanda ezicijile, athathe udoti, zanqwabelana ngemva kobusika. Ngaphezu kwalokho, kwaba kuhle ezidingekayo uyogeza okugeza bese bethunga izingubo ezintsha. Esikhanyayo iholide abantu kwadingeka ukukhohlwa zonke ukuthukwa nokubi, ukuze ususe zonke imicabango emibi, hhayi ukungena izibopho yasemshadweni hhayi zesono.
nezinkolelo ezihlukile kwezakhe
Kungani ama-Easter ngokuthi ama-Easter? Phela, leli iholide namanje kubabangele eziningi-legends. usuku Easter zenzisa ngakho futhi emsulwa ukuthi amadimoni nomoya omubi abawayo ngokusebenzisa umhlaba, futhi ukukhalela kwabo futhi sobs ungezwakala Ngekhefu lephasika Vigil.
Abantu bendawo babekholelwa ukuthi ngalolu suku ungakwazi ukubona ukuthi ayibonakali isimiso evamile, ucele uNkulunkulu ngakho konke befisa ukwenza kanjalo. Kukholakala ukuthi uma ngesikhathi inkonzo Easter ehlisela yikhandlela phansi, singabona ngumenzi wezimangaliso. Futhi uma ukuma embundwini nge cream ushizi, kuyobe sekuba i-kungenzeka kalula ukuqaphela asekhambeni wendiza umsila uyathakatha.
Easter waxhumana nabantu Russian nge ekukhishweni izifiso. Abantu babekholelwa ukuthi ngalolu suku, ungakwazi zinike impumelelo emsebenzini wonke ngonyaka. Uma umuntu osekhulile on Easter Suku nekama izinwele zakho, kuyoba nabazukulu abangu amaningi njengoba ayenakho ikhanda lakhe nezinwele zakhe. Futhi uma ngesikhathi inkonzo owesifazane osemusha siphendukele kuNkulunkulu ukuze sithole umyalezo yomyeni wakhe omuhle ke ayethembisene okuphakanyiswe wakhe esikhathini esizayo esiseduze.
Inkolelo yokuthi ukuvuswa kwabafileyo kwakheka umbono ngesisekelo ukuthi ezweni imimoya yabafile yehlela ku-Easter ebusuku. Uma wayefisa, lo omunye abalangazelela ngokufa abathandekayo babo, wayebona kuye ethempelini izimfundiso, ukulalela izikhalazo zakhe nezikhalazo.
Kungani ushizi okuthiwa yiPhasika
Ngokuvamile abantu abakwazi ukuhlukanisa kusukela ikhekhe Easter, futhi kuvamile impela. Eqinisweni, ikhekhe imikhiqizo ufulawa, futhi Easter - izaqheqhe. Isiko yokudala Easter ushizi umkhiqizo zigcwele yonk 'indawo abahlala engxenyeni ephakathi ye-Russia. Kwezinye izifunda, lo mkhiqizo nje akazi, futhi iyaqhubeka ibizwa ngokuthi ama-Easter ikhekhe.
Kungani-Easter ngokuthi ama-Easter? Esinye isizathu ukuthi ukulungiswa imikhiqizo ushizi kubalulekile inqubo njengoba amakhekhe namakhekhe. Kukholakala ukuthi lo mkhiqizo Culinary limelela Lethuna Elingcwele (ezakheke like iphiramidi ufushanisiwe). Lokhu dish, kanye ikhekhe, ubhekwa izimpawu eyinhloko the Resurrection. Futhi ngendlela efanayo, ngokuba isidlo yokusaswidi kuyintokozo esingapheliyo ukuphila. Kukhona ngisho yeziphakamiso Easter iwuphawu eSiyoni lasezulwini - umsuka iJerusalema Elisha.
I-Mysteries of Easter Island
Easter Island isiqeshana ehlane ezweni, lost in ePacific Ocean, kubuye kungokwalabo eChile. Izwe lonke uyazi naye ngokusebenzisa i izikhumbuzo itshe engavamile. Ngakho kungani shayela-Easter Island ngakho? Yini ekhethekile ngakho?
Dutch Admiral uJakobe Roggeveen okuthiwa, wahamba ngomkhumbi esuka Amsterdam ukufunda Umhlaba Davis wayengeyena umLungu wokuqala ukuthola i-Easter Island. Nokho, kuyinto yokuqala ukusungula indawo yayo. Futhi ngokuthi isiqhingi ngakho-ke Roggeveen (imikhumbi yakhe eboshelwe kuso ngosuku-Orthodox iholide elikhulu Easter). Kwakungu-April 5, 1722.
Befika ogwini, amatilosi aphawula ukuthi izakhamuzi zendawo ovuthayo imililo phambi omkhulu eziqoshiwe itshe. Sekuyisikhathi eside Lezi izikhumbuzo kwaba izivakashi isimanga ngubani namanje abaqondi ukuthi labo bantu angase amakhe kubo, ngaphandle kosizo izinto zokwakha kanye nobuchwepheshe. Ngalezo zinsuku endaweni, wathola Roggevenom, wahlala ababecishe babe izinkulungwane ezintathu abomdabu. Babiza esiqhingini sabo Nui ( "inkaba zomhlaba").
Sihalalisela ema-February 23 nozakwethu, amathiphu namasu
Ukugujwa kosuku lokuzalwa - samanje ingane zangempela, iholide ujabule
Amajaji ukubingelela evesini bese temibhalo yephrozi netindzaba
Peking Duck: iresiphi
Umhleli womdanso Boris Eifman: Biography, umsebenzi wokudala
Izidakamizwa ephumelela nokujikeleza kwegazi cerebral palsy. amakhambi Folk ukuthuthukisa kwegazi cerebral
"Anfield" Stadium. Umlando enkundleni emzini "Liverpool"